Archive du 20180505
Miha mahery vaika ny tolona Faharavan’ny fitondrana no fetra
Fandresena lehibe iray ho an’ny tolon’ny depioten’ny fanovana sy ny vahoaka ny nandavan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny volavolan-dalàna fehizoro momba ny fifidianana noho ny teboka marobe tsy mifanaraka amin’ny lalàmpanorenana.
Jean Max Rakotomamonjy Manaiky fandravana governemanta sy antenimiera
Raha ny fandravana ny antenimieram-pirenena na ny governemanta no vahaolana amin'izao olona eto Madagasikara izao dia ekeny ny firosoana amin'izany, raha ny fanehoan-kevitry ny filohan’ny Antenimieram-pirenena Jean Max Rakotomamonjy taorian’ny fihaonany tamin’ny FFKM teny Tsimbazaza omaly.
Be galona manao politika Mamotika ny mpitandro ny filaminana
Voizina foana ny hoe tsy manao politika ny mpitandro ny filaminana saingy toa mandiso tanteraka izany ny zava-misy raha dinihina amin’ny miseho ankehitriny.
Antoko Maitso Ny fialan-dRajaonarimampianina ihany no vahaolana
Nanamafy ny antoko Maitso, tarihin’ny filoha nasionaliny Georget Alexandre omaly fa ny fialan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ihany no vahaolana eto amin’ny firenena ialana amin’ny krizy.
Voahangy Rajaonarimampianina Poizina ho an’ny fitondrana ?
Tsy fantatra intsony izay misy an’i Voahangy Rajaonarimampianina, vadin’ny filoha amin’izao fotoana.
Mpiasan’ny fiadidiana ny repoblika sy primatiora Hany sisa tsy mitokona
Taorian’ny fanambaran’ny fianakaviamben’ny foloalindahy ny 23 aprily teo fa tsy handray baiko hitondra any amin’ny fandatsahan-dra ny mpiray tanindrazana intsony dia nitohivakana ny fiandrasan’ireo mpiasan’ny minisitera sy andrim-panjakana isan-karazany ny fakan’ireo mpitolon’ny 13 mey azy teny amin’ny fiasanany tsirairay avy.
Mpanelanelana iraisam-pirenena Tsy te ho tompon’andraikitra intsony ?
Somary mangina ny mpanelanelana iraisam-pirenena raha oharina tamin’ny krizy 2009.
Rafanomezantsoa Jean Nirina Kandida filoham-pirenena
Hilatsaka hofidiana ho filoham-pirenena ny filoha nasionalin’ny fikambanana HAFARI Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina. Betsaka ireo antony manosika azy hanao izany, raha ny fanazavany omaly tetsy Anosizato.
Mpanara-dia ny HVM Lany andro amin’ny fanaratsiana
Any anaty tambajotran-tserasera sisa no ahitana ny fanehoan-kevitr’ireo mpanara-dia ny antokon’ny fitondrana na ny Hery vaovao ho an’i Madagasikara.
Hetsika ho an’ny fanovana Hangotraka ny any Toamasina anio
“Malalaka ny hetsika ataon’ny depiote eo amin’ny tany malalaky ny lapan’ny tanàna; saingy aoka samy hanaja ny lalàna velona ny rehetra amin’ny fitandroana ny filaminam-bahoaka.
FFKM Nihaona tamin`ireo lehibena Andrimpanjakana
Eo anatrehan`ny zava-misy eto amin`ny firenena dia miditra lalindalina kokoa amin`ny fitadiavam-bahaolana miorina amin`ny fampihavanana ireo filoham-piangonana eo anivon`ny FFKM.
Federasiona Malagasin’ny Baolina kitra Amin’ny 2 jona ny fivoriambe
Taorian’ny lanonana tsotra, natao teny Isoraka foibe toerany, niarahabana sy nanoloran’ny FMF fankasitrahana ny Barea U 17 niatrika ny lalao Cjsoi tany Djibouti farany teo ka nahazoany ny medaly volafotsy no nanambaran’Atoa Doda
Rugby Malagasy Ho any Algerie ny Makis U 18
Efa nivoaka tamin’ny sabotsy 28 aprily 2018 teo ny anaran’ireo mpilalao handrafitra ny Makis U 18 hiatrika ny fiadiana ny “Jeux des Jeunes” taranja rugby à XV hotontosaina any Algerie amin’ny faramparan’ny volana mey izao na amin’ny tenatenan’ny volana jolay 2018. Efa nanomboka tamin’ny alatsinainy 30 aprily teo ny fampivondronana azy ireo.
Vonona tanteraka ny fikambanana AT2B na Andraisoro Tia Basket-Ball amin’ny fikarakarana ny Fety de Basket-Ball (basikety, lanonana, mozika, dihy) hotontosaina amin’ny sabotsy 12 mey sy sabotsy 4 aogositra sy ny alahady 5 aogositra 2018, raha ny nambaran-dRasaony Pascal mpitantana azy teny amin’ny biraon’ny Otiv Tanà agence Vonjy teny Avaradoha omaly zoma 4 mey 2018.
Tsy misy fanafodiny
Inona moa izany sisa fanantenana ho an’ity fanjakana ity ? Nolavin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana iny volavolan-dalàna mifehy ny fifidianana.
Mpandraharaha avy any la Réunion sy eto Madagasikara Hifampizara traikefa
Nampahafantarina tetsy amin’ny Hotel Colbert Antaninarenina omaly ny fisian’ny fihaonambe hokarakarain’ny Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM) sy ny Club Export Réunion hatao amin’ny volana novambra ho avy izao any La Réunion.
Tetikasa “Week end startup” Tanora 80 mianadahy nahazo tombontsoa tany Mahajanga
Tanora 80 mianadahy indray no nahazo tombontsoa tamin’ilay tetikasa Week end startup notanterahina tany Mahajanga nanomboka ny 27 ka hatramin’ny 29 aprily lasa teo.
Rija Ramanantoanina « Efa lalana voasoritra ny mozika. »
30 taona niakarana an-tsehatra, nitondrana mozika tsotra kanefa dia nahafahana nitety izao tontolo izao.